"Van Cleef & Arpels ။ အချိန်၊ သဘာဝ၊ အချစ်" - မြင့်မားသောရတနာအိပ်မက်
အီတလီနိုင်ငံတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် Van Cleef & Arpels သည်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်မြင့်သောရတနာသမိုင်းကိုထူးခြားသည့်ပြပွဲတစ်ခုတွင်တင်ပြသည်။
"ဗန် Cleef & Arpels ။ အချိန်၊ သဘာဝ၊ ချစ်ခြင်း” ကင်းမျှော်စင်အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက် \_ tဖြေ - ထူးခြားတဲ့တင်ဆက်မှု။
အဆိုပါ "ဗန် Cleef & Arpels ။ အချိန်၊ သဘာဝ၊ ချစ်ခြင်း” ပြပွဲကိုပြသထားသည် Alba Cappellieri, Politecnico di Milano မှရတနာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းပါမောက္ခနှင့်မှာဒါရိုက်တာ Vicenza ရှိရတနာပြတိုက်။ အမေရိကန်ဒီဇိုင်နာ Johanna Grawunder setting ကိုဒီဇိုင်းကူညီပေးခဲ့သည်။ Mrs Grawunder သည်အလင်းရောင်ဒီဇိုင်းပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူ၏အလုပ်များကိုနိုင်ငံတကာတွင်ကျော်ကြားသည်။
"ဗန် Cleef & Arpels ။ အချိန်၊ သဘာဝ၊ ချစ်ခြင်း” ပြပွဲ။
Johanna Grawunder မှအခန်းမြင်ကွင်း။
ဂလော်ဒီယာ Carletti Camponeschi, ရတနာရတနာအိပ်မက် မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
အီတလီတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပြင်သစ်ရတနာသည်အထင်ကြီးဖွယ်ကောင်းသောပြပွဲတွင်ပြသထားသည့် Maison ၏ထူးခြားသောလက်မှုလက်ရာ၊ လေးရာရတနာနှင့်အနုပညာတ္ထု.
ရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာပြီးနောက် Van Cleef & Arpels သည်အလှတရားများကိုသဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များမှပစ္စည်းများ၊ ပုံစံများနှင့်စည်းကမ်းချက်များအရစစ်ထုတ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုပြသနိုင်ခဲ့သည်။
Alba Cappellieri, မှူး
အချစ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှု၊ အလှအပနှင့်အနုပညာတို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသောထူးခြားသောစွမ်းရည်ကိုပြသသည့်ပြပွဲသည် Time, Nature and Love မှတဆင့် themes ည့်သည်များကိုအဓိကပြဇာတ်သုံးခုကိုပြသသည်။
ဒီပြပွဲသုံးခုကိုဖြတ်ပြီးပြပွဲတစ်ခုလုံးကို Italo Calvino ရဲ့ American သင်ခန်းစာစာအုပ်ကစိတ်ကူးနဲ့ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တာပါ။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှာဟားဗတ်တက္ကသိုလ်သို့အလည်အပတ်ခရီးစဉ်အီတလီစာရေးဆရာပြုစုခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအခြေခံထားတဲ့ထုတ်ဝေမှု။
မော်ကွန်းတိုက်မှအဖိုးတန်စာရွက်စာတမ်းများ၊ ကန ဦး ဒီဇိုင်းများနှင့်ဂူးကပ်များမှ Maison's Collections နှင့်ပုဂ္ဂလိကချေးငွေများမှရရှိသောထူးခြားသောရတနာများ၏နောက်ကွယ်တွင်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုလှလှပပဖော်ပြသည်။
ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သတ်၍ အခန်း ၁၀ ခန်းသည် Calvino ၏စာအုပ်နောက်မှ Van Cleef & Arpels ၏လက်ဝတ်ရတနာများသည် ၂၀ ရာစုရှိစိတ်စိတ်အမွှာမွှာဖြစ်နေသောခေတ်ကိုကိုယ်စားပြုပုံကိုစူးစမ်းလေ့လာသည်။
၎င်းသည်အချိန်ကာလတစ်ခုသာမကဖန်ဆင်းခြင်းတစ်ခုပြီးမြောက်စေရန်လိုအပ်သည့်ပမာဏပမာဏလည်းပါ ၀ င်သည်။
ထို့အပြင်ကျောက်မျက်ရတနာများနှင့်အဖိုးတန်ပစ္စည်းများသည်ပါရီနှင့်ကမ္ဘာ၊ အတိတ်နှင့်အနာဂတ်၊ ရတနာနှင့်အခြားအနုပညာပုံစံများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုအကြံပြုသောအချိန်ကာလတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်နေကြောင်းပြသသည်။
တီထွင်ဖန်တီးမှု၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် timeless ကြော့ရှင်းမှုတို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသောထူးခြား။ တသမတ်တည်းဖြစ်သောစတိုင်ကို Maison ကတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။
Arc က de Triomphe Powder ဖြစ်ရပ်မှန်။
ရွှေဝါရောင်၊ ပတ္တမြား၊ မြ၊ စိန်များ။ 1945 ။
ဗန် Cleef & Arpels စုဆောင်းခြင်း
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်ပြင်သစ်ရတနာသည်ပါရီနှင့်၎င်း၏အထင်ကရနေရာများအားဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့် Maison ၏ဇာတိမြို့ကိုဂုဏ်ပြုသောအနေဖြင့်ကလစ်များ၊ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအမှုန့်အမှုန့်သည်ကယ်ဆယ်ရေးတွင်ထွင်းထုထားပြီးကျောက်မျက်များဖြင့်ပုံဖော်ထားသောပုံနှစ်ပုံကိုကိုယ်စားပြုသည်။ နောက်ခံပန်းချီကားများကိုချန့်စ်Élyséeကိုသရုပ်ဖော်ထားသည်။ စေ့စပ်စွာဖြင့်ပြန်ဆိုထားသည့် Arc de Triomphe သည်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပြန်လည်ပုံဖော်။ ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာသောအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ညွှန်းကာရှုထောင့်ကိုလွှမ်းမိုးထားသည် ရတာဟာ.
အဆိုပါ "ထူးခြားဆန်းပြား", က Romantic ခေတ်ကာလအတွင်းဖြစ်သကဲ့သို့, လူတို့သညျမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကနေအချိန်နှင့်နေရာတွင်ဝေးကွာသောဘဝဆီသို့ ဦး တည်ခံစားခဲ့ရသည့်ဆွဲဆောင်မှုယောက်ျားကိုယ်စားပြုတယ်။
အိန္ဒိယ Maharajas သည်ပဲရစ်ကို စတင်၍ ကျောက်မျက်ရတနာများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောဥရောပရတနာဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနှင့်အညီကျောက်မျက်ရတနာများပြုလုပ်နိုင်ရန် ပို၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။
Van Cleef ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောရတနာများသည်ထိုအချိန်ကအိန္ဒိယ၏ကြော့ရှင်းလှသောကြော့ရှင်းမှုအပေါ်သစ္စာရှိခဲ့သည်။
အိန္ဒိယ၊ အာဖရိကနှင့်အာရှအနုပညာလက်ရာများသည်အချိန်ကုန်၊ စတိုင်လ်များထက် ကျော်လွန်၍ လှပသောအနုပညာ၊
ပလက်တီနမ်၊ နီလာ၊ ပတ္တမြား၊ မြ၊ y ရှစ်၊ စိန်။ ၁၉၂၄ ။
ရွှေဝါရောင်, ထွင်းထု, စိန်။
နှစ်ခုလက်ကောက်သို့ Transformable ။ ဖြုတ်တပ်လို့ရသောဆွဲကြိုး - ကလစ်။ 1971 ။
ဗန် Cleef & Arpels စုဆောင်းခြင်း။
၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင်ဖန်တီးခဲ့သောဤအိန္ဒိယလည်ဆွဲသည် Herness the Begum Salimah Aga Khan ၏စုဆောင်းမှုတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်တွင်အိန္ဒိယ၌မွေးဖွားလာသည့် Sarah Crocker Poole အားမင်းသမီးသည်မင်းသမီး၏အလှတရားကြောင့်လူသိများပြီး ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင်မြင့်မားသောမင်းသား Karim Aga Khan နှင့်လက်မထပ်သေးမီကပင်ဖက်ရှင်သင်္ကေတအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောလည်ဆွဲသည်ထူးခြားလှသည်။ စိန်ပေါင်း ၇၄၅ ခုကျော်ဖြင့်စုစုပေါင်း ၅၂ ကာရက်ရှိ ၁၈ ရာစုကျောက်မျက် ၄၇၀ ကာရက်ရှိကျောက်ချပ် ၄၄ လုံးပေါ်သို့စိန်ပွင့်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ လက်ကောက်နှစ်ချောင်းနှင့်ကလစ်တစ်ချောင်းဖြစ်လာနိုင်သောကြောင့်ဤလည်ဆွဲသည်ပြောင်းလဲနိုင်သောရတနာများအနုပညာလက်ရာ၏အံ့မခန်းဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤအပိုင်းသည်စိတ်ခံစားမှုများပြည့်နှက်နေသောဖန်တီးမှုများနှင့် ၂၀ ရာစု၏ဒဏ္myာရီအချစ်ဇာတ်လမ်းများ၏အမှတ်အသားများကိုပြသထားသည်။
အင်အားအရှိဆုံးသောအင်အားဟုသတ်မှတ်ပြီးပါရီရှိ Alfred Van Cleef နှင့် Estelle Arpels တို့၏မင်္ဂလာပွဲပြီးနောက် ၁၉၀၆ ခုနှစ်တွင် High Jewellery Maison ကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။
အပိုင်း ၃၀ - ကလစ်များ၊ နားကပ်များ၊ လက်ကောက်များ၊ အရာဝတ္ထုများနှင့်အခြားအရာများ - အတူပုံကြမ်းများနှင့်မော်ကွန်းတင်ထားသောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူအဖိုးတန်လက်ဆောင်များ၏ပုံဆောင်စွမ်းအားအပြင်လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်အတွင်းရှိဒဏ္legာရီအများဆုံး Van Cleef & Arpels နှင့်ဖွဲ့ထားသောနှောင်ကြိုးကိုဖော်ပြထားသည်။ ။
နောက်ဆုံးခန်းသုံးခန်းသည်သဘာဝကိုမြှုပ်နှံထားခြင်းဖြစ်သည်။ Van Cleef & Arpels ၏ကျွမ်းကျင်သောလက်မှုလက်ရာနှင့်သဟဇာတဖြစ်မှုကိုလိုက်စားခြင်းနှင့်အတူအနုပညာကိုအမှန်အတိုင်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်ကိုရှာဖွေရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
သဘာဝတရားသည်အမြဲတမ်းလှုံဆော်သောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၉၀၆ ခုနှစ်မှစ၍ အပင်များ၊ ပန်းများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များသည်အဖိုးတန်ကျောက်မျက်များမှခဲယဉ်းသောကျောက်တုံးများနှင့်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများအထိအရောင်၊
သစ်ပင်ပန်းမန်များ၊ မင်္ဂလာပါ ပြင်သစ်အမြင့်ရတနာ Maison သည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်အသိအမှတ်ပြုထားသောစတိုင်ကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင်အထောက်အကူပြုသည်။
ဗန် Cleef & Arpels ။ Passe Partout ရတနာ။ ၁၉၃၉။ ရွှေ၊ နီလာ၊ ပတ္တမြား၊ စိန်။ တစ်လက်ကောက်သို့မဟုတ်ခါးပတ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ကလစ်များ။
ဗန် Cleef & Arpels ။ သုံးငှက် Clip ။ ပလက်တီနမ်၊ အဝါရောင်ရွှေ၊ နီလာ၊ ပတ္တမြား၊ စိန်များ။ ယခင်အီရန်၏မင်းသမီး Soraya ၏စုဆောင်းခြင်း၌တည်၏။
ဗန် Cleef & Arpels ။ Chrysanthemum ကလစ်။ ၁၉၃၇။ ပလက်တီနမ်၊ ရွှေဝါရောင်၊ နက်နဲသောအရာရာရာပတ္တမြား၊ စိန်များ။
ဗန် Cleef & Arpels ။ Lapel စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့။ 1923 ခုနှစ်ပလက်တီနမ်, ရှဟံ, သန္တာ, စိန်။
ဗန် Cleef & Arpels ။ ပန်းညှပ်။ ပလက်တီနမ်၊ အဝါရောင်ရွှေ၊ အဝါရောင်နှင့်အဖြူရောင်စိန်များ။
ဗန် Cleef & Arpels ။ Vendômeကော်လံပေါ့ပါး။ 1950 အဝါရောင်ရွှေ။
ဗန် Cleef & Arpels ။ ဆံပင်ကောက်ကောက်Minaudière။ 1935. ပလက်တီနမ်, ရွှေဝါရောင်, အနက်ရောင်ယွန်း, စိန်။
ဗန် Cleef & Arpels ။ Romeo Brooch နှင့် Juliet Brooch ။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်။ Romeo လက်ကမ်းစာစောင် - ရွှေဝါရောင်၊ မြ၊ ပတ္တမြား၊ ပုလဲ။ Juliet လက်ကောက် - ရွှေဝါရောင်၊ မြ၊ နီလာ၊ ပတ္တမြား၊ ပုလဲ။
ဗန် Cleef & Arpels ။ ဘဲလေးကလစ်ညှပ်။ ၁၉၄၅။ ရွှေဝါရောင်၊ နီလာ၊ ပတ္တမြား၊ စိန်များ။
ဗန် Cleef & Arpels ။ Flaps နှင့်အတူ Ludo လက်ပတ်နာရီ ၁၉၄၉ ။ ရွှေဝါရောင်၊ နက်နဲသောအရာဖြစ်သည့်နီလာ၊ စိန်များ။
ဗန် Cleef & Arpels ။ Barquerolles Choker ။ 1971 အဝါရောင်ရွှေ, မြ, စိန်။
ဗန် Cleef & Arpels ။ အလှအပနတ်သမီး၏စိတ်ဝိညာဉ်။ 1941 ပလက်တီနမ်, ပတ္တမြား, မြ, စိန်။
ဗန် Cleef & Arpels ။ စက်ဝိုင်းအပိုင်း။ 1931 ပလက်တီနမ်, စိန်။
ဗန် Cleef & Arpels ။ ကော်လာ။ 1928. ပလက်တီနမ်, စိန်။
ဗန် Cleef & Arpels ။ Oiseau က de Paradis ကလစ်။ ၁၉၄၂။ ရွှေဝါရောင်၊ ပလက်တီနမ်၊ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ စိန်များ။
ဗန် Cleef & Arpels ။ Peony ကလစ်။ 1937. ပလက်တီနမ်၊ ရွှေ၊ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောပတ္တမြား၊ စိန်များ။ အဲဂုတ္တုပြည်၏ HRH မင်းသမီး Faiza ၏ယခင်စုဆောင်းမှု၌တည်၏။
ဗန် Cleef & Arpels ။ ဇီလည်ဆွဲ။ 1951 Platinum, ရွှေဝါရောင်, စိန်။
ဗန် Cleef & Arpels ။ အိန္ဒိယကလက်ကောက်။ 1971 ရွှေဝါရောင်, ထွင်းထု, စိန်။ နှစ်ခုလက်ကောက်သို့ Transformable ။ ဖြုတ်တပ်လို့ရသောဆွဲကြိုး - ကလစ်။
ဗန် Cleef & Arpels ။ အီဂျစ်လက်ကောက်။ ၁၉၂၄ ခုနှစ်ပလက်တီနမ်၊ နီလာ၊ ပတ္တမြား၊ မြ၊ သရက်၊ စိန်။
ဗန် Cleef & Arpels ။ Arc က de Triomphe Powder ဖြစ်ရပ်မှန်။ ရွှေဝါရောင်၊ ပတ္တမြား၊ မြ၊ စိန်များ။ 1945 ။
ဗန် Cleef & Arpels ။ အချိန်, သဘာဝ, ချစ်ခြင်းမေတ္တာ - ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်အထိ ၂၀၂၀ အထိဖြစ်သည်
Palazzo Real, Piazza del Duomo 12, Milano (အီတလီ) - အီတလီဘာသာစကားဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်
တယ်လီဖုန်း: + 39-02-884 45 181
အီးမေးလ် - c.mostre@comune.milano.it
တနင်္လာနေ့ - ၁၄:၃၀ မှ ၁၉:၃၀ အထိ
Tue-Wed-Fri-Sun: ၉.၃၀ မှ ၁၉:၃၀ အထိ
သူ - Sat: 9:30 မှ 22:30
Tags:ပြပွဲများ • မြင့်မားသောရတနာ • ဗန် Cleef & Arpels
“ မှတ်ချက် ၁ ခု"ဗန် Cleef & Arpels ။ အချိန်၊ သဘာဝ၊ အချစ်။ ”"